एनआईसी एशिया बैंकको थप दुईवटा शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं- एनआईसी एशिया बैंक झापा जिल्लाको केचनाकवल गाउँपालिका वडा नं. १ को घेराबारी र स्याङ्गजा जिल्ला, आँधीखोला गाउँपालिका वडा नं. १ को पञ्चमूलमा क्रमशः आफ्नो ३०औं र ३१औंं शाखारहित बैंकिङ सेवा सोमवारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
केचनाकवल गाउँपालिकाको घेराबारीमा सञ्चालनमा ल्याइएको शाखारहित बैंकिङ सेवाको समुद्घाटन बैंकका दमक क्षेत्रीय कार्यालयका सम्बन्ध प्रबन्धक विशाल घिमिरेले गरे । उक्त शाखारहित बैंकिङ सेवाका प्रतिनिधिको रूपमा पार्वती कुमारी राजवंशीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
यसैगरी आँधीखोला गाउँपालिकाको पञ्चमूलमा सञ्चालनमा ल्याइएको शाखारहित बैंकिङ सेवाको उद्घाटन पञ्चमूल गाउँपालिका –१ का वडा अध्यक्ष लोकप्रसाद ढकालले गरे । पञ्चमूलको शाखारहित बैंकिङ सेवाका प्रतिनिधिको रूपमा गंगाधर ढकाललाई नियुक्त गरिएको छ । शाखारहित बैंकिङ सेवाबाट देशका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयले आफ्नो गाउँमै स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत् बैंकिङ सेवा लिन सक्नेछन् । साथै सो सेवाबाट बैंकिङ कारोबारको लागि स्थानीयलाई लामो दूरीसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा बैंकिङ कारोबारको विकास हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
बैंकले मुलुकभर २८४ शाखा कार्यालयहरू, २८९ एटीएम, ४२ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर एवं ३१ वटा शाखारहित बैंकिङ ईकाईमार्फत् बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनमा पाँच लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव